कांग्रेस महामन्त्रीले मागे अर्थमन्त्रीको राजीनामा ! – NawalpurTimes.com
कांग्रेस महामन्त्रीले मागे अर्थमन्त्रीको राजीनामा !
प्रकाशित : २०७९ वैशाख ७ गते १२:३०
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बुधबार बिहान आफ्नो ट्विटरमा एउटा तस्बिर पोस्ट गरे । तस्बिर पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्यको हो ।
०५६ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा आचार्य अर्थमन्त्री थिए । उनको जोडबलमा सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर तिलक रावललाई पदबाट हटायो । रावलले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गुहारे । सर्वोच्चले उनको पद थमाइदियो । त्योसँगै आचार्यले नैतिक रूपमा अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिए ।
अहिले पनि सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध जाँचबुझ समिति गठन गरेसँगै अधिकारी निलम्बनमा परेका थिए । सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिकारी सर्वोच्च गए । मंगलबार सर्वोच्चले तत्काल अधिकारीमाथि कुनै कारबाही नगर्न भन्दै सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले यही वैशाख १३ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने या नपर्ने भन्ने विषयमा दुवै पक्षलाई बोलाइएको हो । त्यतिन्जेलसम्म गएको चैत २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय र २५ गतेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो ।
शर्माले आचार्यको प्रस्तावमा सरकारले गभर्नर बर्खास्त गर्ने निर्णय सर्वोच्चले उल्ट्याएसँगै उनले राजीनामा दिएको स्मरण गरेका हुन् । शर्माले अगाडि लखेका छन्, “समयले सम्झना गरिरहेको छ कांग्रेस नेता महेश आचार्यलाई, जसले आफ्नो प्रस्तावमा सरकारले गरेको गभर्नर बिदाइको निर्णय अदालतले उल्ट्याएपछि अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभयो ।”
त्यसो त गएको चैत २८ गते सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेता शीर्ष नेताहरूको बैठकमै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा मागिएको थियो । गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयपछि कांग्रेस नेताहरूले अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेका हुन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समेत सहभागी उक्त बैठकमा कांग्रेस नेताहरूले शर्मालाई फिर्ता बोलाएर अर्को व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रीमा पठाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले गभर्नर हटाउनुको कारणबारे प्रधानमन्त्रीसँग जानकारी पनि मागेका थिए ।
गएको चैत २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो । जाँचबुझ समिति गठनसँगै गभर्नर अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । कुनै गल्तीविनै प्रतिशोधका कारण सरकारले आफूमाथि छानबिन थालेको भन्दै अधिकारीले सरकारको निर्णय नै खारेजीको माग–दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।